Iyo Rio 2016 mitambo kunyorera kwave kuwanikwa | IPhone nhau
Iyo Rio 2016 mitambo kunyorera kwave kuwanikwa
Kana iwe uchida mitambo, iwe unozoziva kuti gore rino Mitambo yeOlympic muRio irikuitwa. Zvingangodaro, iwe unotova nechaunofarira svikiro kuti uwane nhau dzichangoburwa, asi Rio 2016 chirongwa chepamutemo, kubva kwatinogona kuwana kwete chete nyaya dzinotyora, asi zvakare kuti zvichaitika riini nekuda kwezvirongwa zvezviitiko zvese zvichaitwa muMitambo yeOlympic inotevera.
Chii chingave chinonyanya kufadza panguva ino chikamu "Mugwagwa & Vanotakura" (nzira uye vatakuri). Seizvo zita rayo rinoratidza, kubva muchikamu chino Tinogona kuona kunoenda torch yeOlympic uye rumwe ruzivo, senge mafoto kana kuti ndiani akatakura tochi yacho pane imwe nguva. Kana, zvakanaka, ndiyo dzidziso, nekuti panguva yekunyora izvi hapana ruzivo rwevatakuri kana mifananidzo iripo. Ini ndinofungidzira ruzivo urwu ruchaonekwa kana mutakuri ari mukurumbira.
Iyo Yepamutemo App yeRio 2016 Olimpiki Mitambo
Chimwe chikamu chandinofunga chakakosha muRio 2016 application ndeye Spectator gwara, kubva kwatingaite ona marongero emakwikwi. Kana ndichifanirwa kutaura chokwadi, handisi kunyatsojekesa nezve ruzivo rwurinoratidza, asi ndinofungidzira kuti machena madota anoreva kuti pane chikamu chinokodzera uye menduru dzinoratidza kuti chatova chikamu chekupedzisira. Muchikamu chino mune ruzivo zvakare pamusoro pemitambo yeParalympic nemaguta anoitirwa makwikwi.
Kunyangwe iko kunyorera kuchitipa ruzivo rwese rwatinogona kushuvira nezve maRio 2016 Olimpiki Mitambo, ine chikanganiso chinoratidzika kunge chakakomba kwandiri: kubva mumaonero angu, mutambo wezvemitambo wakakosha seMitambo yeOlympic haigone kuve nechikumbiro chepamutemo. izvo inongowanikwa chete mumutauro wenyika iyo yavakaitirwa uye neChirungu. Asi hei, mune chero mamiriro ezvinhu, isu tatova nechisungo chikumbiro muApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo Rio 2016 mitambo kunyorera kwave kuwanikwa
Tora Tesla yako kunze kwegaraji uchishandisa Siri pane Apple Watch
Apple inoshandira aimbova injinjini weGoogle ane ruzivo mumotokari dzemagetsi